Hiob 30 | Intanɛt so Bible | Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
30 “Afei de nkurɔfo reserew me,+Nnipa a manyin sen wɔn,+Wɔn a anka meremfa wɔn agyanomNto me nguankuw akraman mpo mu. 2 Wɔn nsam tumi no​—dɛn na ɛyɛ maa me?Ahoɔden biara nni wɔn mu.+ 3 Ohia ne ɔkɔm nti wɔatwintwam,Na kwayow so na wodidi,+Baabi a nnɛra na ahum ne ɔsɛe wɔ. 4 Nkyenhaban na wɔtetewee wɔ wura mu,Na sisia nnua na ɛyɛɛ wɔn aduan. 5 Wɔpampam wɔn fii nnipa mu;+Nkurɔfo huroo wɔn sɛ ɔkorɔmfo. 6 Subon nsianee so na wɔtenatenae,Asase ntokuru ne abotan mu. 7 Nnua ntam na wɔteɛteɛɛm;Nsasono ase na wɔboaboaa wɔn ho ano. 8 Ogyimfo+ mma, ne nea onni din mma,Wɔde mpire apam wɔn afi asase no so. 9 Nanso afei de, wɔde me to dwom,+Na mayɛ asereserede ama wɔn.+ 10 Wɔtan me, wɔatwe wɔn ho afi me ho kɔ akyirikyiri;+Na wɔamfa ntasu nso ankame m’anim.+ 11 Onyankopɔn agow m’agyan hama mu na wabrɛ me ase;Nkurɔfo yi wɔn ano nnareka wɔ me so. 12 Me nifa so, wɔsɔre gyina sɛ ahuhufo asefo;Wogyaa me nan,Nanso wɔde ɔsɛe ban sisi m’anim.+ 13 Wɔadwiriw m’akwan;Hwee nni wɔn ho sɛ amanehunu nko na wɔde ba me so,+Na wɔanhia obiara mmoa. 14 Wɔba sɛnea wɔnam ɔkwan a ɛtrɛw so;Ahum mu na wofi tu ba me so. 15 Mpofirim ahude adan aba me so;Wɔapam me nidi sɛ mframa,Na me nkwagye atwam kɔ sɛ omununkum. 16 Mprempren de, me kra rehi wɔ me mu;+Amanehunu nna+ aso me mu. 17 Anadwo, me nnompe+ mu tutu me ma ehunhuan,Na nea ɛwe me no nnyae da.+ 18 Emu den ma m’atade sakra;Ɛkyekyere me sɛ m’atade kɔn. 19 Watow me akyene dɔte mu,Enti mayɛ sɛ mfutuma ne nsõ. 20 Misu frɛ wo sɛ boa me, nanso wunnye me so;+Masɔre agyina hɔ sɛ tie me. 21 Woadan otirimɔdenfo ama me;+Wode wo nsa mu ahoɔden nyinaa anya me ho menasepɔw. 22 Woma me so kyerɛ mframa, na wode me tena so;Afei wonan me hooyɛ mu. 23 Me de, minim sɛ owu mu na wobɛsan de me akɔ,+Ne ofie a ateasefo nyinaa hyia mu. 24 Nanso obi nteɛ ne nsa nka nea asɛe awie yi,+Na nea waporɔw no, obiara nhwehwɛ mmoa mma no n’ahohia mu. 25 Ampa ara, masu ama nea ɔwɔ amanehunu mu;+Me kra adi ohiani ho awerɛhow.+ 26 Metwɛn adepa, nanso bɔne na ɛbae;+M’ani daa hann so, nanso kusuuyɛ na ɛbae. 27 Me nsono hurui na anyɛ komm;Amanehunu nna hyiaa me. 28 Awerɛhow+ mu na menantewee esum mu;Mesɔree wɔ asafo no mu, na misu hwehwɛɛ ɔboafo. 29 Madan sakraman nua,Ne sohori mma adamfo.+ 30 Me were ayɛ tumm,+ na ɛwaewae fi me ho;Me nnompe awo ma ayɛ hyew. 31 Me sankuten adan awerɛhow,Na m’abɛn wɔ hɔ ma asufo nne.